ပရိသတ်တစ်ယောက်ရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာအခြေအနေကို မသိခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နောင်တရမိတယ်ဆိုတဲ့ အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့် - Cele Gabar
ပရိသတ်တစ်ယောက်ရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာအခြေအနေကို မသိခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နောင်တရမိတယ်ဆိုတဲ့ အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်
မယ်လိုဒီဝေါလ်သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိလာခဲ့သူ အိုင်ရင်းကတော့ ဒီနေ့မှာ ပရိသတ်တစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့အကြောင်းကို မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။
” ကျွန်မစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသော အမျိူးသားတစ်ဦး မသိကျွမ်းဘဲ ညနက်သန်းခေါင်ကြီး Audio call နဲ့ခေါ်ပါတယ်… လူစိမ်းလည်း ဖြစ်အမျိူးသားလည်း ဖြစ် ညလည်းနက်နေပြီဆိုတော့ မလိုအပ်ဖူးထင်လို့ မကိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး စိတ်လည်းခုခဲ့ပါတယ်…. သူကတော့ *Swiss ကနေအားပေးနေတယ်နော် * လို့စာပို့သွားတယ် …ဒါလည်း မထူးဆန်းနေခဲ့ပါ ဒါပေသိ•••••အခုသူဆုံးသွားပြီလို့ သူACနဲ့စာတွေ့တော့ (ကျမစိတ်ခုနေခဲ့လို့ ရက်လည်း မကြာသေးလို့ မှတ်မိနေပါတယ်ဒီACကို) ဝင်ကြည့်မှ သူကဆေးရုံတက်နေတဲ့သူ…. ဒါထက်ပိုပြီး တိုင်းတပါးမှာ သူတစ်ယောက်တည်းတဲ့ သူ့အမေကိုလွမ်းကြောင်းရေးထားပြန်သေး….. (အမေတစ်ယောက်တည်းသာရှိတဲ့ ကျွန်မဘဝနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်) …. ဒီရောဂါဆိုးကြီးနဲ့ သေရမှာ ကြောက်တယ်လို့ ဖတ်မိချိန်မှာ ကျမ နောင်တရမိသလိုဖြစ်သွားရပါတယ်…. သူတင်ထားတဲ့စာအရ * ဆေးရုံက ဖုန်းတစ်နာရီပေးသုံးတဲ့အချိန် သူစာတင်ပါတယ်* တဲ့ …. သူကျွန်မဆီဆက်ဖြစ်တာက အားပေးစကားများကြားချင်လို့လား••• မြန်မာချင်းမို့ စကားပြောချင်တော့ ထိမိထိရာနှိပ်မိသလား…. သူနှစ်သက်တဲ့အဆိုတော်က ကျွန်မများဖြစ်နေလေသလား ?Sorry Bro.. R.I.P ” ဆိုပြီးရေးသားမျှဝေလာပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
အနုပညာရှင်တစ်ယောက်မို့ လူတိုင်းကို စာပြန်၊ စကားပြောနေဖို့ အချိန်မရှိပေမယ့် အိုင်ရင်းကတော့ သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်း မျှဝေခဲ့တာပါ။ ဆုံးပါးသွားတဲ့အစ်ကိုကတော့ ရေမြေခြားမှာ တစ်ယောက်တည်း ဆေးရုံတက်ရင်း ကိုယ်ချစ်တဲ့အဆိုတော်နဲ့ စကားပြောချင်ခဲ့ဟန်တူပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Irene Zin Mar Myint, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ, အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်
Previous post လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှောင်မည်းပြီး လမ်းပျောက်သလိုခံစားနေရပြီဆိုတဲ့ မေ့ချစ်သက်
Next post ဆယ်တန်းဆိုတဲ့အရာကို ကိုယ်မအောင်ခဲ့ပေမယ့် ညီလေး၊ညီမလေးအားလုံးကို အောင်စေချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ရွှေထူး